ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇောရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁၂ – ၈ – ၂၀၀၉) | Communist Party of Burma
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွင်းရှိ BIA. BDA. PBF တပ်မတော်သားဟောင်းများ၏ တတိယအကြိမ် ‘ တပ်မတော် ‘ သို့ ပန်ကြားချက် (၁၅ – ၇ – ၂၀၀၃)
← ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်၍ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၃ /၂၀၀၉) ဘန်ကီမွန်းလာတုန်းက ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးဘူး၊ ဂျင်ဝက်ကိုတော့တွေ့ခွင့်ပေးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ →